'Lesi yisizini ... kuya kuBenchmark Against Trends Trends | Martech Zone
'Lesi yisizini… kuya kuBenchmark Against Trends Yonyaka
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 22, i-2017 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 22, i-2017 Douglas Karr
Kumasayithi afana nelami, isikhathi samaholide singabukeka sicindezela impela njengoba ngibuyekeza ama-analytics. Ithrafikhi isiyonke yehlile kanye nethrafikhi ephilayo njengoba izethameli zami zishintshela kwimodi yeholide futhi ziqala ukubeka imizamo kuze kube ngemuva konyaka omusha. Futhi yisikhathi lapho kufanele ngiziqinisekise sobabili namakhasimende ami ukuthi sisebenza kahle yize kunemiphumela emibi esiyibonayo ekwehliseni inyanga nenyanga noma kwesizini.
Ukhiye wokuziqinisekisa ukusebenzisa izitayela Google njengesilinganiso sokuhlaziya ithrafikhi yakho eya kuyo. Abangane bami abahle bane Ukulawulwa kwezinambuzane zase-Indianapolis inkampani. Njengoba ukuwa kuphendukela ebusika, umsebenzi wezinambuzane wehla kakhulu. Ngaphakathi kweGoogle Analytics, sibona cishe i-40% yethrafikhi esiyibonile kusukela esiqongweni sehlobo. Izibalo zokubuka ezihamba phansi njengalezo zinyanga-ngaphezulu zingakhathaza, kepha kungokwemvelo impela.
Nakhu ukuthambekela okuphelele kosesho lokulawulwa kwezinambuzane e-United States. Inzalo ishadiwe njengenkomba yenzalo, ngakho-ke ungabona ukuthi inzalo ephakeme isehlobo futhi njengamanje imayelana nama-47.
Awukaqedi okwamanje. Futhi kufanele ukhumbule ukuthi kunezifunda ezingaphakathi kwezwe ezinezinkathi ezinde nezimfushane, noma kungekho ngisho izinyanga ezibandayo nhlobo, ngakho-ke uma uyibhizinisi lendawo uzofuna ukuhambisa ukuhlaziywa kwedolobha elikhulu. . Sikhethe isifunda sedolobha i-Indianapolis, futhi uyabona ukuthi inkomba ingama-25.
Njengoba kunikezwe lo mkhuba wesizini, singalinganisa ithrafikhi yesayithi ngokumelene nayo. Uma inzalo iku-25% wenzalo ephakeme kusuka ehlobo, singaqhathanisa ithrafikhi yethu yesiza nomgwaqo ophambene nalokhu. Leli klayenti lehle cishe ngama-35% - hhayi ama-75% kusukela ehlobo, ngakho-ke sikhululekile ukuthi basasebenza ngaphezu kwesilinganiso. Ithrafikhi yethu ephilayo inyuke unyaka nonyaka kepha yehle cishe ngama-27%. Anginathemba eleqile, noma kunjalo. Sibe nesizini emnene eMidwest uma kuqhathaniswa neminye iminyaka ngakho-ke kufanele silindele ukuthi isidingo sizokwenyuka unyaka nonyaka.
Ngabe uke wabheka izitayela zenzalo yezinkathi ezithile zebhizinisi lakho futhi wazimatanisa nazo?
Tags: Ama-Analyticsgoogle izitayelaizitayela zonyakaizinkathi